WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game]
Myanmar IT Resource Forum » TEMPORARY PLACE » » Unknown Discussions » WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game]
1 WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 22nd July 2010, 3:10 am
WOW version 3.3.3a ရှိရပါမည်။
WOW Client ရဲ့ realm IP ကို 203.81.162.185 သို့ ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပြောင်းပုံမှာ သင့် computer ထဲမှ wow.exe သွင်းထားသော folder ထဲသို ့
၀င်ပါ။ ပြီးလျှငိ data folder ထဲသို ့ဝင်ပါ။ အဲဒီထဲကမှ enUS folder ထဲက
realmlist.wtf ဆိုတဲ ့file ကို notpad ဖြင် ့ဖွင် ့ပြီး set realmlist ရဲ
့နောက်က IP ကို 203.81.162.185 သို ့ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင်ကစားလို
တွင် အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။
set realmlist "203.81.162.185"
Last edited by Fox on 3rd August 2011, 9:04 pm; edited3times in total (Reason for editing : code)
2 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 3rd August 2010, 11:40 pm
Online game ကိုတော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန် ့ပြန် ့
့ဧ။် မှနေ၍ wow (world of
warcraft) online game ကိုမြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးမှသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုတစ်နေရာထဲတွင်တစုတ
ဝေးထဲကစားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို ့ရာတွင်မြန်မာပြည်အနှံ့အထူးသဖြင်
့မန ္တလေး ၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မကွေး စသည် ့လူငယ်များ၍ internet အသုံးများသော နေရာများသို
့လိုက်လံ သတင်းပေးနိုင်ခြင်း အားနဲ နေပါသေးသည်။ အကြောင်းတိုက် ဆိုင်၍ဤစာကိုဖတ် ဖြစ်သောသူငယ်ချင်းများသည်
ရန်ကုန်ပြင်ပတစ်နေရာ ရာမှဖြစ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍
တွင် online game account များကိုအခမဲ ့ရယူ၍ အခမဲ ့
ကစားနိုင်ပါသည် ဆိုသည့် သတင်းကိုဆက်လက်ဖြန့် ဖြူးပေးကြပါအုံးလို မေတ္တာရပ် ခံ အပ်ပါသည်။
Last edited by Fox on 3rd August 2011, 8:55 pm; edited3times in total (Reason for editing : code)
3 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 4th August 2010, 11:00 am
အနော်တို ့ကွန်ကွန်နဲ့Online game ကစားလို ့သင့်တော်ပါ့ မလားလို ့
4 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 4th August 2010, 5:18 pm
ကျွန်တော်တို ့ကွန်ကွန်နဲ ့အခု ကျွန်တော်တို့server မှာကစားနေတာ ၅၄၆ ယောက်ရှိပါပြီ
ကျွန်တော်တို့server က local မှာထားထားပါတယ်။ local connection ကတော ့လိုအပ်တာထက်ကိုပိုပါသေးတယ်။ ၅၁၂ အပြည့်ရနေမယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်
5 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 4th August 2010, 9:48 pm
yes yes, You can play it from Local.
ချနေရင်း ကျကျသွားတာကလွဲရင်ပေါ့.. တစ်ခါတစ်လေဆို ပြန်ကို တက်မလာတော့တာ
DotA ကို Online မှာ ကစားချင်တဲ့သူတွေအတွက် Internet ဆိုင်က အများသုံး Connection နဲ့လည်း DotA ရသ ခံစားလို့ရအောင် စဉ်းစားကြည့်နေတယ်။ အကောင်အထည်ပေါ်သွားရင်တော့ DotA Gamer တွေအတွက် Strongest Community ရမယ်လို့ ယုံတယ်။
ခုတော့ အိပ်မက်လေးများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်
6 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 5th August 2010, 10:42 pm
ကျွန်တော်တို ့ဆာဗာမှာလာရောက်လေ့လာ ကစားကြည် ့ဖို ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this link.] မှာအကောင့် အခမဲ ့ပြုလုပ်ပြီးကစားနိုင်ပါတယ် lag တယ် မ lag ဘူးဆိုတာတော ့ကိုယ် ့ရဲ ့ကွန်နက်ရှင် နဲ့ကိုယ် ့ကွန်ပြူတာရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ ့ဘဲဆိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြည် ့ပေါ့ နော် အခု ကျွန်တော်တို ံဆာဗာမှာအကောင့်ပေါင်း ၈၇၀ ကျော်ရှိပြီး active အကောင့်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော် နဲ့တပြိုင်ထဲ ၀င်ကစားတဲ ့လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ညတိုင်း player ၈၀ ကျော်အတူတကွ ကစားနေပါတယ်။ သူတို ့ဆီကတော့lag တယ် ကျသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ကလွဲ ရင် မရှိကြပါဘူး။ တော်တော်ရှားပါတယ် ။server က local မှာထားထားတာဆိုတော့သိပ်ပြီးမလေးလှပါဘူး။ (local = ပြည်တွင်း) ။ အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာပါပြီ
7 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 5th August 2010, 10:58 pm
ဟုတ်ကဲ့ လူအရင်မရှာခင် Terms of Service မှာ Link ပျောက်နေတဲ့ကိစ္စကို အရင်ရှင်းပါဦးခင်ဗျာ...
I disagree လုပ်ရင် Google ရောက်
I agree လုပ်ရင် Terms of Service ကိုပြန်ရောက် ထပ်လုပ် ပြန်ရောက်... အင်း ငါ့ဘဝလဲ Looping ပတ်နေပါလား
8 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 6th August 2010, 12:30 am
jellygynn wrote: အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာပါပြီ။
အဟိ. ကျွန်တော့် စိတ်ကူး ဘာလဲဆိုတာ မသိလို့... ဘာလဲဆိုတာ သိရင် ဒီတောင် လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး..
ပြီးတော့ စီးပွားရေးလုပ်ရင် win-win ပုံစံဘဲလုပ်ပေါ့။ Game ကို ဆော့မယ်လူတွေဘက် ဦးစားပေးစဉ်းစားလုပ်ရင် အောင်မြင်မှာပါ။
နောက်ကို ကျွန်တော်တို့လည်း ၊ အစ်ကိုနဲ့ ဆွေးနွေးစရာတွေလည်း ရှိလာလောက်ပါတယ်။ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ရမယ့် ကိစ္စထိပါချင်ပါလာနိုင်တယ်
9 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 7th August 2010, 3:25 am
JZ Trinity လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ WoW Server ကိုတည်ထောင်လာတာဟာတစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့
မယ်။အခုပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အရ ကျွန်တော်တို့ server မှာစတင်ဆော့တဲ့သူတွေကို FOC 1 လပေးပါ့
ကျွန်တော်တို့က Server IP ကတော့
တကယ်လို့ကစားချင်တဲ့သူများရှိရင်ကျွန်တော့ကို pm ပို့ပြီးဆက်သွယ်ကြပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ဂမ်း server မှာဆိုရင် lvl 1 ကနေစတင်ဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
10 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 7th August 2010, 7:19 pm
ကျွန်တော်တို့vakok online game server မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးပါတယ်။ ကိုပိစိလေးပြောသလို terms of service မှာ link ပျောက်နေသလို ကိစ္စလေးတွေပေါ ့။ ဒ ါပေမယ် ့ကျွန်တော်တို ့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးသွားပါ့မယ်။ [You must be registered and logged in to see this link.] ထဲကိုဝင်ရောက်စမး်သပ်သုံးစွဲဖို ့အချိန်ပေးတဲ ့အတွက်အများကြီးကျေးဖူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
11 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 7th August 2010, 7:31 pm
ကျွန်တော် ထပ်ပြောချင်တာကတော့ အားလုံးဘဲ အလကားရတဲ့ Script တွေကို သုံးပြီးတော့ ပိုက်ဆံကို အမြတ်ကြီးစား မယူချင်ကြပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ Very Happy
ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံ ၊ အရင်း ကျေရုံ + ကိုယ့်အတွက် 10% လောက် အမြတ်တင်ပြီးဘဲ ယူကြပါလို့...
အခမဲ့တော့ အကောင့်ပေးဖွင့်တယ် ၊ အထဲကျမှ ရိတ်တယ် ဆိုတာမျိုး ကြီး ဖြစ်နေမှာစိုးလို့.
ခုက မြင်နေရတဲ့ စျေးတွေက မြင်မကောင်းဘူး.
12 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 7th August 2010, 9:03 pm
ဒါပေမယ့်အကုန်လုံးကိုတော ့သိမ်းကြုံးပြီး
အမြတ်ကြီးစားနေတယ်လို ့တော ့မပြောစေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို ့website
မှာလဲကြေညာထားပါတယ် အကောင့်သစ် တစ်ခုကို ပြုလုပ်တဲ ့သူတိုင်း အမြဲတန်းတစ်လ free trail နဲ့နောက်ပိုင်းလတွေဆက်လက်ကစားချင်မှတလကို
၃၅၀၀ ကျပ်နှုန်းသက်မှတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ့တို ့ပေးတဲ့service ကိုကြိုက်နှစ်သက်မှဆက်ကစားကြပါ။
အကောင့်ဖွင် ့သူတိုငး်ကို အမြဲတန်း တလ free trail ပေးထားတာအဲဒီအတွက်ပါ။ ဒီဆိုဒ်မှာ
လာရေးတယ်ဆိုတာကလဲ ဒီ forum မှာရှိတဲ ့နောင်တော် ၊ညီတော်တို ့ရဲ ့အကြံ ဉာဏ် နဲ ့လမ်းပြပေးတာကိုလိုချင်လို
့ပါခင်ဗျာ။ ကောင်းသောအကြံပေးတာဆိုရင် တော ့
13 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 7th August 2010, 9:14 pm
မေးရင် တိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မေး...
မျှဝေချင်ရင် တိတိကျကျ မျှဝေ...
အခြားသူများ၏ အချိန်ကို အလကား မဖြုန်းတီးပစ်ပါနဲ့...
့ copy / pase လိုက်တယ်နော်။
14 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 7th August 2010, 9:14 pm
အဲ.. အဲဒါတော့ ဟုတ်၏..
စျေးအနည်းဆုံးကို ပထမဆုံးတွေ့ဖူးတာ vakok ကိုဘဲ...
စျေးများလာမှာစိုးလို့ ပြောတာပါ... ဟီး
15 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 8th August 2010, 5:31 pm
Hi, ကျွန်တော်အခုvakok server မှာအကောင့်လုပ်ပြီးစကစားကြည် ့်နေပါတယ်။မဆိုးပါဘူးကစားနေတဲ့ လူတော်တော်ကိုများပါတယ်။ JZ Trinity ဆိုတဲ့server မှာလဲကစားကြည့် ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အလကားဆိုအကုန်ကိုလိုချင်နေတာ အဟီး..JZ Trinity ကလဲ၁လအလကားပေးတယ်ကြားလို ့ဘယ်လိုအကောင့်လုပ်ရမလဲသိချင်လို ့ပါ။ JZ ကအတိုကြီးတွေ
16 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game] on 24th August 2010, 10:35 pm
VAKOK မှ Game ဝါသနာရှင်များ အတွက် LAN game များကို online မှတဆင့် မြန်မာတစ်နိူင်ငံလုံးရှိ သူငယ်ချင်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ကစားနိူင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါပြီ။ World of Warcraft (WOW) 3.3.3a MMORPG online game ကိုလည်း [You must be registered and logged in to see this link.] တွင် account များကို အခမဲ့ ပြုလုပ်၍ ချိတ်ဆက်ကစားနိူင်ပါပြီ။
1) World of Warcraft Version 3.3.3a ရှိဖို့လိုပါတယ်။
2) Account အသစ်ဖွင့်ရန် [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုသွားပါ။
3) ဘယ်ဘက် Menu ရှိ New account ကို သွားပြီး လိုအပ်သည့် username, password တို့ကိုဖြည့်ဆွတ်၍ account အသစ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။
4) ပြီးရင် သင့် computer ထဲရှိ WOW folder ထဲမှ data -> enUS -> realmlist.wtf File ကို notepad ဖြင့် ဖွင့်ပါ။
5) realmlist.wtf ထဲရှိ set realmlist "xx.xx.xx.xx" ကို set realmlist "203.81.162.185" သို့ပြောင်းပြီး save လုပ်ပါ။
6) wow.exe ကို run ပြီး စတင်ကစား၍ ရပါပြီ။
အကယ်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် direct ချိတ်ဆက်၍မရပါက... (This applies to MPT users too...)
1) [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုသွား၍ "Vakok Client" ကို download လုပ်ပါ။
2) Vakok Client ကို install လုပ်ပါ။
3) ပြီးရင် Desktop ညာဘက်ဒေါင့် (System tray) ရှိ computer icon ပုံအနီရောင်ကို right click နှိပ်ပြီး connect လုပ်ပါ။
4) အကဲ၍ သင့် network က proxy သုံးရန်လိုအပ်ပါက အဲ့ဒီ icon ကို right click နှိပ်၍ Proxy Settings ထဲတွင် ဝင်ပြင်နိူင်ပါသည်။
5) server နှင့် ချိတ်ဆက်၍ရလျှင် icon က အစိမ်းရောင် ပြောင်းသွားပါလှိမ့်မည်။
6) WOW folder ထဲမှ data -> enUS -> realmlist.wtf File ကို notepad ဖြင့် ဖွင့်ပါ။
7) realmlist.wtf ထဲရှိ set realmlist "xx.xx.xx.xx" ကို set realmlist "192.168.23.254" သို့ပြောင်းပြီး save လုပ်ပါ။
Cool wow.exe ကို run ပြီး စတင်ကစား၍ ရပါပြီ။
** Please choose "Pandora (Private)" Realm if you are using Vakok Client to connect..
အကူအညီလိုပါက [You must be registered and logged in to see this link.] သို့ mail ပို့၍ သို့မဟုတ် Froum ထဲတွင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိူင်ပါသည်။
Ps . မြန်မာနိုင်ငံ မှာ wow (world of warcraft) ကို online ကနေကစားလို့ရပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံ vakok.net က porvide လုပ်တဲ့wow ကို စင်္ကာပူ၊ မလေး၊ စတဲ ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာရှိတဲ ့ရွှေ တွေ ရွှေအချင်းချင်းကစားချင်ရင် ကစားလို ့့ရပါပြီ။ but blizzard တော့မသိစေနဲ ့နော် ပိုက်ပိုက်လာတောင်းနေမှာစိုး လို့အဟီး။
17 Re: WOW online game ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ ့ကစားကြရအောင် [Game]